प्रधानमन्त्री ओलीले किन उद्घाटन गरेनन् पोखराको १० तले होटल ? – Naya Pusta
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ जेष्ठ १८, शनिबार १९:०८ [post-views]
पोखरा । भव्य समारोहबीच होटल उद्घाटन गर्ने भनी डाँकिएका अतिथि, पत्रकार, व्यवसायी लगायतको बाक्लो उपस्थितिबीच प्रधानमन्त्री केपी ओली होटल प्रवेश गरे । सबैले स्वागत गरे ।
यता, आयोजकले माइकमार्फत प्रमको आगमनसँगै अब केही छिनमा होटल उद्घाटन गर्ने जानकारी गरायो । मानिसहरु व्यग्र प्रतीक्षामा बसे । तर होटलको माथिल्लो तलामा पुगेका ओली उद्घाटनमा सरिक भएनन् ।
यो थियो, पोखरा लेकासाइडस्थित नौ तले स्वीस इन्टरनेश्नल होटल सरोवर । मापदण्डविपरीत निर्माण भएकोमा पहिलेदेखि नै विवादित सो होटल प्रधानमन्त्री ओली नै उद्घाटनमा आउने भनेपछि झनै चर्चामा थियो ।
लेकसाइडको मीरा गल्लीमा निर्मित सो होटलका संचालक हुन्, प्राडा भरत पहारी । पहारी आफै पनि यसअघि पटक पटक विवादमा तानिएका थिए । विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठह-याएको थियो ।
गत वर्षको मंसिरमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा फैसला हुँदा उनी दोषी ठहरिएका थिए। ९८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई कैद तथा जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।
त्रिविअन्तर्गत इञ्जिनियरीङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा कार्यरत रहेका प्रा. डा. पहारीले पदमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै २०७३ साउन २४ मा ४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनकी श्रीमतीविरुद्ध पनि अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनै प्रा. डा. पहारी महानगरको मापदण्ड निर्धारण सिफारिस समितिको संयोजकसमेत रहेर काम गरेका थिए । उनी आफैले मापदण्डविपरीत होटल निर्माण गरेको आरोप छ ।
होटलले पोखरा महानगरपालिकाबाट मात्र ३ तलाको निर्माण स्वीकृति लिएर ९ तला पु-याएको जनाइएको छ । महानगरले ३ तला अर्थात ३५ फिटसम्मका घर, होटल तथा भौतिक संरचना निर्माणको अनुमति दिने गरेकोमा पहारीले जबर्जस्त १ अर्ब २५
करोड रुपैयाँ खर्चेर ९ तले होटल निर्माण गरेका हुन् ।
सुरुवातमा यो घटनाबारे थाहा नपाएकोमा पोखरा आइसकेपछि सल्लाहअनुरुप विवादित होटल उद्घाटन गरेर थप विवादमा नफस्ने गरी ओलीले सेफ ल्यान्डिङ गरेको नेकपानिकट नेताहरु बताउँछन् । ओलीले होटल उद्घाटन नगरे पनि सो होटलमा खाना खाइ केहीबेर आराम गरेका थिए ।
उनले पोखरामै भएको स्काउट युवा सम्मेलन (रोभर मुट) उद्घाटन गर्न स्काउट ड्रेस सोही होटलमा फेरेर सबैलाई जिल पार्दै निस्किए । होटल उद्घाटन पूर्व नै सामाजिक सञ्जालमा समेत यसअघि चर्को विरोध भएको थियो ।
फोटोहरु : रिजन नेपाल ।
रातभरमा यसरी बनाउनुहोस् आफ्नो अनुहारलाई गोरो र चम्किलो